Ụbọchị: 31 October 2019
Iangbọ okporo ụzọ mbụ nke Peshia, 1888, meghere n’etiti Tehran na temple nke Shah-Abdol-Azim na Rey. Ahịrị nke 800km, nke e wuru n’elu mita 9mm, bụ maka ndị njem, ọ bụ ezie na agbakwunye ọtụtụ ngalaba okwute ka emesịa. emecha [More ...]
Sefọdụ ngalaba nke Menemen Aliağa Çandarlı okporo ụzọ ọgbaaka mepere okporo ụzọ
Inye njikọ nke İzmir na Aliağa na Çandarlı Port nwere okporo ụzọ dị elu, okporo ụzọ ụgbọ ala na ndịda dị na ndịda nyere site na okporo ụzọ obodo dị ugbu a bufeere netwọala n'okporo ụzọ. [More ...]
Gini kpatara TCDD k oputara ihe si n’ajụjụ banyere iweghachite ndi oru?
TCDD ekwuputala nsonaazụ nyocha nke ọnụ ya maka iweghachite ndị ọrụ ruo ọnwa atọ zuru ezu. Ekwuru ike Minista Turhan ka ọ bụrụ ihe kpatara na ịkọwaghị nsonaazụ nnwale ahụ. Ndị ọrụ TCDD na-eche maka nsonaazụ nyocha maka iweghachite ndị ọrụ [More ...]
Derbent Station Emepe Epeepee Ọzọ
A na-ezube begbọ okporo ígwè Derbent nke akụkọ ihe mere eme na njedebe nke Ọktọba, ma oge a ọ dịgidere ruo December Dị ka ili Oğuzhan Aktaş si Kocaeli Barış Akwụkwọ akụkọ; Histgbọ okporo ígwè Der Historical Derbent dị na Kartepe, State Railways [More ...]
XCDX TCDD. Mpaghara Directorate Station, Museum, Train Station train na Muselles maka njem ụgbọ oloko dị mkpirikpi site na Direlọ Akwụkwọ inlọ Akwụkwọ na Afyonkarahisar na-arịọ maka njem n'ime oke nke protocol bịanyere aka na Director nke National Education. [More ...]
Ọkụ na ụgbọ oloko njem na Pakistan ..! 65 nwuru anwu; Threegbọala atọ gbara ọkụ na ụgbọ oloko si Lahore ruo Karachi, Pakistan. Dịkarịa ala, ndị 65 nwụrụ na ọkụ. Onye Minista Pakistan Railways [More ...]
Onye isi oche nke melọ Azụmaahịa na Ahịa Ahmet Ekmekçi kwuru na ọrụ Samsun Sarp Railway dị ezigbo mkpa wee kwuo, adına Anyị na-akwado ọrụ a ruo na njedebe nke mmepe mpaghara. [More ...]
Icheta Bursa Metro Timet, Ahịa tiketi na okporo ụzọ; Enwere ọdụ 7 na Bursaray, gụnyere 38 n'okpuru. Ogologo uzo uzo uzo abuo bu 39km ma onwe ya kpamkpam na usoro uzo. Oflọ ọrụ BursaRay [More ...]
Ngalaba cagbọ njem na Njikwa okporo ụzọ Kocaeli, Clọ Ọrụ Njem Njem iji mezuo ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke Mobile Office Caravan na-aga Kandira. Caravania Office Office, 5 nọ na Kandira maka ụmụ amaala ụbọchị niile [More ...]
Kedu mgbe a ga-etinye ọdụ ụgbọ elu Istanbul Airport?
A ga-arụcha ụzọ ụgbọ oloko Istanbul na ọkara nke abụọ nke 2020. H. Kadri Samsunlu, Onye isi oche na onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu IGA, kwuru nkwupụta banyere okwu a. Ndị Istanbul na-esochi ya [More ...]
Ilzọ ụgbọ elu n'oké Osimiri Ojii bụ Nrọ Atatürk
Onye nnọchi anya mpaghara Union of Technicians Army Musa Kiranli, “Oké Osimiri Ojii bụ nrọ Ataturk na ọrụ nke mba a na-emezighi emezi. Onye nnochite anya ndi agha nke ndi Technicians Army Musa Kıranlı, Samsun tinyere oru Sarp Railway [More ...]